Nin dad ku laayey duleedka Muqdisho oo lagu qabtay Gaalkacyo – news
26 September 2020 Farmaajo fursad qaali ah ayuu ka lumiyey shacabka
26 September 2020 Jubbaland sidee u aragtaa ansixinta heshiiska doorashadda?
26 September 2020 Al-Shabaab oo carruur laga soo badbaadiyay
26 September 2020 Baarlamanka oo ansixiyay heshiiska doorashadda
Nin dad ku laayey duleedka Muqdisho oo lagu qabtay Gaalkacyo
Taliska Booliiska Soomaaliya ayaa war kasoo saaray qabashada gacab-ku-dhiigle dil wadareed ka geystay dhawaan nawaaxiga Muqdisho, kaasoo lagu qabtay magaaladda Gaalkacyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Aweys Cisman Cabdi, oo 9-kii bishan July ee 2020 ku dilay afar qof oo isku qoys ahaa degaanka Tabeelaha Sheekh Ibraahim oo katirsan Garasbeeleey ayaa lagu qabtay magaaladda Gaalkacyo, ee xarunta Gobolka Mudug.
Sida uu xaqiijiyay Qaasim Sheekh Doon Taliyaha Qeybta Boliiska Gobolka Mudug, Qabashada ninkan ayaa ku timid iskaashi ay sameeyeen Hoggaanka Baarista Dembiyada [CID] iyo Boliiska Galmudug oo markii uu dilka dhacay kadib isla wadaagay macluumaadka ninkan.
Aweys ayaa qoriga AK-47 u adeegsaday dilka dadka shacabka ahaa, oo la sheegay inuu ku weeraray gurigooda oo ku yaalla xero barakacayaal degaanka Tabeelaha Sheekh Ibraahim xili ay aas u sameynayeen gabar uu horey uga dilay isla qoyska.
Lama oga wali sababta uu falkan fooshan xun ugu kacay, laakiin wararku waxay sheegayaan in qoyska uu Aweys laayay ka qabey Gabar, taasoo iyana kamid ahayd dadka uu dilay, waxaana markii dambe uu ka cararay goobta isagoo u safray Puntland, si uu cadaaladda uga baxsado.
0 Comments Topics: dil qoys galmudug muqdisho tabeelaha sheekh ibraahim
Qarax ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Warar 21 September 2020 18:34
Warar 21 September 2020 14:31
Farmaajo fursad qaali ah ayuu ka lumiyey shacabka